U fiirso Teaser -kii ugu horreeyay ee Miyaad Ka Cabsanaysaa Mugdiga? Dib u bilow - Dhaqanka Pop
Daawo Teaser -kii Koowaad Ee Ma Ka Cabsanaysaa Mugdiga? Dib u bilow
Fiidiyowga ka fog Nickelodeon
Ku soo biir Youtube
Nickelodeon wuxuu wadaagay goosgooskii teaser -kii ugu horreeyay ee dib -u -kicinta gaaban ee Miyaad Ka Cabsanaysaa Mugdiga? Taxanaha anthology-ka cabsida ee asalka ah ee carruurta ayaa raacay koox carruur sheeko-jecel oo jinni ah kuwaas oo sheekooyin ku beddelay agagaarka dab-shid. Sheekooyinkii Bulshada Midnight, sida carruurtu isu magacowday, waxay ku soo noolaadeen holaca dabkooda.
Kor ka daawo teaser kooban
Bandhigga Canadian -ka wuxuu socday toddobo xilli oo qayb ka ahaa barnaamijka Snick fiidnimadii Sabtida. Daabacaadda cusub waxay noqon doontaa minisyo saddex qaybood ah oo diiradda saaraya sheekooyinka Carnival of Doom. Qeyb kasta waxay ku qaadan doontaa saacad quusitaan goobtan sharka ah.
Kabka cusub wuxuu soo bandhigayaa dhowr ruug -caddaa ah barnaamijyada carruurta. Sida hore loo soo sheegay , Madow? 2.0 ayaa soo bandhigi doonta Sam Ashe Arnold ( Ugu Fiican. Ugu daran. Toddobaadka. Waligaa. ), Jeremy Taylor ( Waxaa , Goosebumps 2: Halloween haunted ), Tamara Smart ( Artemis Fowl ), Lyliana Wray ( Madow, Qoriga Sare: Maverick ), iyo Miya Cech ( Rimka Adduunka ).
farqiga u dhexeeya marzipan iyo almond paste
Miyaad Ka Cabsanaysaa Mugdiga? waxaa markii hore la qorsheeyay iyada oo qayb ka ah riixitaanka guud ee fikradda oo ay ku jirto filim muuqaal ah oo ka socda Paramount. Filimka ayaa dib u dhacay waqti aan xad lahayn kadib markii qoraa hore Gary Dauberman ( Waxaa , ah Qirasho/Annabelle caalamka) bidix. In kasta oo aysan caddayn in tani ay horseedday qaxitaankiisa, Dauberman wuxuu caddeeyay inuu doonayo inuu sharfo taxanaha asalka ah isagoo diyaar u ah inuu mugdi galo.
Bandhiggaasi aad buu iigu muhimsan yahay. Ma aanan dooneynin inaan aad u yaraado maxaa yeelay waqtigeedii, waxay lahayd dhacdooyin runtii aad u dhib badan iyo dhacdooyin runtii mugdi ah, '' ayuu u sheegay Filim Slash . 'Runtii waan isku duubay dhinacyadan ... waxaan u malaynayaa in cabsidu caafimaad u tahay carruurta. Uma maleynayo inay tahay inaan had iyo jeer ciidno cidhifyada waxyaabaha.
Fannaanka Star Wars wuxuu la jaanqaaday Colin Trevorrows Qoraalkii IX ee aan la adeegsan sida Filim Gaaban oo Nool
Star Wars: Rise Of Skywalker Box Office Numbers Waa Halkaan (UPDATE)
Daawo Muuqaalka Koowaad ee Nickelodeons Ma ka Cabsanaysaa Mugdiga? Dib u bilow
Shannon Elizabeth waxay ku biirtay Jilaaga Dib u Midaynta Maraykanka
Faraha Dhexe: Taariikh Kooban oo ah Shimbir rogista
ciidanka cirka 1 labiska hoose ee ragga
sida loo sameeyo cake qasacadaysan oo dhadhan ah sida keega roodhida
waa biil burr mandalorian
waa mid aad u adag in lala shaqeeyo
Fanaanka Ciyaarta Carshiga Epically ayaa dib u habeeyay Heesta Mawduuca
Fiiri sheekadan qosolka badan, ee dib loogu daray heesta dulucda HBOs Game of Thrones.
Shia LaBeouf wuxuu ku jilayaa Saint Padre Pio filim soo socda kadib eedeymo xadgudub
Shia LaBeouf ayaa loo tuuray inuu ku muujiyo nolosha dhabta ah ee Saint Padre Pio filim cusub oo uu hogaaminayo Abel Ferrara. Willem Dafoe ayaa sidoo kale wadahadalo door ah.
Aasaaska Qurxinta Qurxinta: Keegga oo lagu dhejiyo dhoobo
Sida loo isugu geeyo keeg leh dhumuc caano caano adag leh! Aad bay uga fududdahay jarista dawooyinka alwaaxa. Farsamadan waligey igama dhicin!